AbaSebenzi baseCanada Imivuzo 2015-16
Isisiseko esisisiseko kunye neNkxaso-mali eyongezelelweyo yamaLungu eSenate yaseCanada
Kukho ngokuqhelekileyo ama-105 ase Senate yaseKhanada, indlu ephezulu yePalamente yaseKhanada . Abaphathi beeCanada abakhethiweyo. Baqeshwe yiGavana Jikelele weChanada kwiingcebiso zikaNdunankulu waseCanada .
Imivuzo yabaSebenzi baseCanada 2015-16
Njengemivuzo yeephalamende , imivuzo kunye nezibonelelo zeentanethi zeCanada zihlengahlengiswa ngo-Ephreli 1 ngonyaka.
Ngonyaka we-2015-16 weezimali, abaphathi be-Canada bafumana ukwanda kwama-2.7 ekhulwini.
Ukwanda kwisebe isekelwe kwinqanaba lokunyuka kwamaholo ukusuka kwiindawo zokuhlala ezizimeleyo zamacandelo eentengiso ezigcinwa yiNkqubo yezabasebenzi kwiSebe lezeNgqesho kunye noPhuhliso lweNtlalo Canada (ESDC), nangona kukho imfuneko esemthethweni ukuba iiSenin hlawulwa ama-25,000 angaphantsi kwama-MPs, ngoko ke ukwanda kwepesenti kusebenza kancinci.
Xa ukhangela imivuzo yabaseSenator, musa ukulibala ukuba ngoxa iiSenators zihamba ezininzi, iiyure zokusebenza azixhomeki njengalezo zamalungu ePhalamende. Akunakudinga ukukhankasela ukunyulwa kwakhona, kwaye ishedyuli yeSeneti ilula ngaphezu kweNdlu yeeNqununu. Umzekelo, ngo-2014, iSenethi yayihleli kwiintsuku eziyi-83 kuphela.
Umvuzo weSeti weeCanada zaseCanada
Ngonyaka-mali ka-2015-16, bonke abaSebenzi baseCanada benza umvuzo osisiseko we-142,400, ukusuka kwii-138,700 zama-$.
Imbuyekezo yoNgezelelweyo yoXanduva olongezelelweyo
AmaSenethi anemithwalo ethe xaxa, njengoSomlomo we-Senate, iNkokeli kaRhulumente kunye neNkokheli ye-Opposition kwi-Senate, iirhulumente kunye neenkcaso zenkcaso, kunye neenhlalo zeekomiti zeSenate, zithola imbuyekezo eyongezelelweyo.
(Jonga ishati engezantsi.)
Isihloko Umvuzo o phezulu Iyonke Imvuzo
Senator $ 142,400
Somlomo we-Senate * $ 58,500 $ 200,900
Inkokheli kaRhulumente kwiSenate * $ 80,100 $ 222,500
INkokeli yePhikiswano kwiSenate $ 38,100 $ 180,500
U Rhu lumente $ 11,600 $ 154,000
Uphiko lokuphikiswa $ 6,800 $ 149,200
USihlalo weeKhosi zikaRhulumente $ 6,800 $ 149,200
USihlalo weCaucus Opposition $ 5,800 $ 148,200
Sihlalo weKomiti yeKomiti $ 11,600 $ 154,000
I-Vice-Sihlalo weKomiti yeKomiti $ 5,800 $ 148,200
* USomlomo weSizwe kunye neNkokeli kaRhulumente kwi-Senate nabo bafumana isibonelelo semoto. Ukongezelela, uSomlomo we-Senate ufumana isibonelelo sokuhlala.
Ulawulo lweeSanate yaseCanada
I-Canada Senate isehlala kwimingcipheko yokulungiswa kwakhona njengoko izama ukujamelana neengxaki eziqhubekayo ezivela kwiinkcitho zokuqala zenkcitho ezigxile kuMike Duffy, uPatrick Brazeau, kunye noMac Harb, abasetyenzisweni okanye bajamelene nexesha elifutshane, kunye no-Pamela Wallin, usaphantsi kophando lweRCMP. Ukongezwa kulokho kukukhutshwa kokufikelela kweengxelo zeminyaka emibili nge-ofisi kaMichael Ferguson, uMphicothi-Jikelele weCanada. Olu phicotho lugxininisa iindleko ze-117 zangoku kunye nee-Senators zangaphambili kwaye ziya kuncomela ukuba ngamatyala angama-10 aya kuthunyelwa kwi-RCMP yophando lolwaphulo-mthetho. Eminye imeko engama-30 okanye njalo "yeengxaki zenkcitho" yafunyanwa, ngokukodwa ibhekiselele kwiindleko zokuhamba okanye zokuhlala. Abachaphazelekayo abachaphazelekayo baya kufunwa ukuba babuyisele imali okanye baya kukwazi ukusebenzisa inxaxheba inkqubo entsha yokulungiswa kwemibutho ehlelwe yi-Senate. Ubulungisa boBulungisa beNkundla yangaphambili u-Ian Binnie uye wabizwa ngokuba ngummeli ozimeleyo wokulungisa iingxabano ngabaSebenzi abachaphazelekayo.
Inye into ecacile kwi-trial yokuqhubeka kaMike Duffy kukuba inkqubo yeSenate iye yalahla kwaye idideka kwixesha elidlulileyo, kwaye iya kufuna umzamo omkhulu kwi-Senate ukujongana nokuthukuthela esidlangalaleni nokufumana izinto kwi-keel.
I-Senate iyaqhubeka isebenza ekuphuculeni iinkqubo zayo.
I-Senate ipapasha iingxelo zenkcitho ngekota nganye kwiSenenethi.
Ukufaka isicelo sePension Pension Pension
Mottoes zePhondo zaseKhanada
Isicwangciso esiMthandayo se-Abby
Ukusekwa kunye neMbali yeNew Jersey Colony
Acorns kunye neeOaks
Yintoni Eyona Ncinci Elula?
Amacandelo ama-Classic Instrumental for Wedding Ceremony